Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia oo kormeer ku tagay garoonka Istaadiyo Muqdisho %
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia oo kormeer ku tagay garoonka Istaadiyo Muqdisho
By Ramzi Yare	 Last updated Dec 9, 2018
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Inj : Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yariisow ayaa maanta kormeer ku tagay garoonka Istaadiyo Muqdisho, waxaana kormeerka ku wehliyay guddoomiye kuxigeenka dhanka arrimaha bulshada Basmo Caamir, guddoomiyaha Isboortiga Gobolka Xasan Wiish, guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Nabada iyo kooxda Jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Australia oo caassimada dalka soo gaartay todobaadkan kadib markii ay marti qaad ay ka heleen maaamulka gobolka.
Kulanka oo ujeedkiisu ahaa in dhallinayarada ay bartaan tuulada isboortiga dalka, ayaa lagu soo wareejiyay qaybaha uu ka kooban yahay garoonka sida kubadda, Kolayga , gacanta , dabaasha iyo kubadda cagta waxaana halkaas ka hadlay madaxda jaaliyadda oo horay garoonka ugu soo ciyaaray iyagoo matalayay heer gobol iyo heer Serie A waxayan xuseen qiimihii iyo sharafkii u lahaa waxayna ballan qaadeen in ay kan jaaliyad ahaan ka qeyb qaadan doonaan dhismaha iyo horumarinta garoonka.
Guddoomiyaha Gobolka oo goobta ka hadlay isla markaana ka mid ahaa ciyaartoydi barisamaadki kusoo ciyaartay garoonka istaadiyio Muqdisho ayaa sheegay in maamulka iyo Gobolka iyo Wasaaradda dhallinayrad iyo Isboortiga oo iskaashanaya ay howlo badan ka qabteen garoonka , wali wajigii koowaad oo qura uu soo idlaaday howlo badana ay harsan yihiin, waxuuna mahad celin usoo jeediyay dhammaan howl-wadeenada gobolka oo sida gaarka isaga xilsaaray dib usoo cleinta bilcdia uu garoonkan lahaa.
Dhalinuarada qurbaha ku dhashay oo ay u ahayd marki u horaysay oo ay garoonka fursad u helaan in ay arkaan ayaa wajigooda laga dheehan karay farxad iyo reynreyn waxayna muujiyeen in soo laabashadooda sanadka xiga in ay rajo wayn ka qabaan in ay garoonkan ku ciyaaaraan.
Cajiib:Salah waa uu diiday Abaalmarintiisa xiddiga garoonka oo waxaa uu ku wareejiyay………….
Messi 2 bulisiyoon ayuu ka dhaliyay kooxda Espanyol guushana ku raacday Barcelona